Isniin - Sabti 9:00 AM ilaa 5:00 AM
Budada xarkaha birta ah
Daawaha birta Zirconium, Zr-Fe
Xafnium Nitride Powder, HfN
Tileen Disilicide, TiSi2
Budada budada ah ee 'Vanadium', VB2
Waxaa loo isticmaali karaa nooc ka mid ah ka-hortagga oksaydhka, ka-hortagga nabaad-guurka iyo hagaajinta xoogga kuleylka ee boron lagu daro, oo loo isticmaalo warshadaha nukliyeerka, qalabka milatari iyo qalabka kale ee cusub
Waxaa loo adeegsaday warshadaha tamarta atomiga iyo warshadaha aerospace. Waxaa loo adeegsaday sida qalabka xakamaynta qalabka wax soo saarka nukliyeerka, waxaa loo isticmaali karaa xoojiyeyaal gantaal yar yar oo xoog badan
Cufnaanta aragti ahaaneed waa 1.44, barta dhalaalaysaa waa 3730-3830 ° C, isugeynta kororka kuleylka waa 8.3 × 10-6, qaab dhismeedka laastikada waa 291GPa, isku dheelitirka kuleylka kuleylka waa 0.22j / cm · S · C
Xasiloonida kiimikada wanaagsan, aan lagu daadin karin asiidhyada. Awood antioxidant xoog leh. TaC badanaa waxaa laga soosaaraa tantalum pentoxide iyo carbon black inert ama yareynta jawiga si loo soo saaro budada naxaasta ah.
dhaqdhaqaaqa dusha sare, caabbinta heerkulka sare, caabbinta qiiqa sare, xoogga sare, adkaanta sare, habdhaqanka kuleylka wanaagsan, adkaanta wanaagsan, waa meel dhalaalaysa oo muhiim ah, xoog sare iyo u adkaysiga daxalka ee qalabka qaabdhismeedka heerkulka sare, wuxuuna leeyahay nuugitaan tayo sare leh iftiinka muuqda, keydinta milicsiga iyo keydinta tamarta iyo astaamaha kale ee keydinta kuleylka. Si ballaadhan ayaa loogu isticmaalay elektarooniga, dahaadhka, ku buufinta carbide, aerospace, tamarta atomiga, filim adag iyo qalabaynta birta iyo meelaha kale ee teknolojiyada sare ee agabyada muhiimka ah. Gaar ahaan biriijka gantaalaha, waxaa loo isticmaali karaa in lagu laabto jawiga koonkan sanka gantaal sanka
Molybdenum disilicide (Molybdenumdisilicide, MoSi2) waa nooc ka mid ah iskuxirka molybdenum silicon, maxaa yeelay labada gacan ee atomiga ah wey isku egyihiin, korantada ayaa u dhow, marka waxay la mid tahay dabeecada birta iyo dhoobada.
Budada Titanium carbide ee loo isticmaalo qalabka ku buufinta kuleylka kuleylka, qalabka alxanka, qalabka filimada adag, matoorrada duulimaadyada militariga ee carbide iyo cermet. Sida wax lagu daro ee soosaarida heerkulbeegyada, hagaaji iska caabbinta
dhoobada wajiga badan ayaa ka mid ah alaabta ceeriin ee qalabka dhoobada wajiga badan leh. Qalabka dhoobada wajiga badan leh ee la soo saaray ayaa badanaa lagu soo qaataa adkaanta, barta dhalaalka badan, xasiloonida kiimikada ee wanaagsan iyo isdhaafsiga Waxaa loo isticmaalaa qeybaha u adkeysata dharka, qalabka goynta iyo korantada
Badeecaddu waa budad-cawlan oo aan caadi ahayn oo leh awood nuugid ballaadhan oo ololaysa hoosta heerkulka sare ama xaaladaha dhimbiillada korantada.
Codsiga: Budada Titanium waa nooc ka mid ah budada birta ah oo leh codsi ballaaran.
Magaca Shiinaha: zirconium aluminium aluminium ah, zirconium aluminium 16 getter Ha ugu yeerin: Wakiil dejiye ah
Koobka loo yaqaan 'Cupric silicide' (cu5si), oo sidoo kale loo yaqaan 'cupric silicide', ayaa ah silikoon silikoon ah oo ka sameysan naxaas, kaas oo ah macdan isku dhafan oo bir ah, taas oo macnaheedu yahay in hantidiisu ay u dhexeyso xeryahooda ionic iyo alloys. Waxay leedahay hagitaan aad u fiican, kuleylka kuleylka, ductility, iska caabbinta daxalka iyo adkeysiga. Filimaanta silsiladda naxaasta ah ayaa loo isticmaali karaa in lagu dhajiyo jajabyada ku saleysan naxaasta, la joojiyo baahintooda iyo socdaalka elektaroonigga ah, isla markaana loo dhaqmo sidii caqabado faafitaan.
Maaddaama qalabka P-nooca heerkulka sare ee heerkulka korantada lagu beddelo boroncarbide, waxaa loo isticmaali karaa noocyo kala duwan oo heerkulka ah, carbide shiidi kara. Sidoo kale waxaa loo isticmaalay qalabka dhoobada injineernimada, nozzles-ka qarxa, soo saarista hareeraha gaaska iyo qaybaha kale ee shaashadda leh iyo shaabadaha.
Maamulaha guud ee 'Magnesium diboride' korantada, birlabta, kuleylka iyo wixii la mid ah. Wuxuu leeyahay codsiyo muhiim ah. Super sameeya magnets, khadadka gudbinta korantada iyo astaamaha dareemeyaasha birlabta